के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि कसरी तपाइँको सवारीसाधन CarPlay अनुकूल बनाउने? | म म्याकबाट हुँ
के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि कसरी तपाइँको सवारीसाधन CarPlay अनुकूल बनाउने?
धेरै पटक हामी तपाईसँग सम्भावनाको बारेमा कुरा गरिसकेका छौँ, लोकप्रिय, कि एप्पल ब्रान्डको इलेक्ट्रिक कारको सम्भावित प्रस्तुतिको पछाडि छ। यद्यपि हालसालै तिनीहरू केवल अफवाहहरू हुन् जसले थुप्रै विश्लेषकहरूलाई विश्वास गर्दैनन्।
CarPlay आज नजिकैको एप्पल हो सवारीको लागि र यो नेभिगेशन प्रणाली हो जुन तपाईंको गाडीमा हुन सक्छ जबसम्म यो सूची भित्र छ कि कम्पनी आफैले यसको वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको छ।
त्यहाँ पहिले नै CarPlay प्रणाली लागू गरेको छ कि सवारीहरु को लागी स्टीरियो प्रणाली को निर्माताहरु छन्, तर अब यो छ कि कार कम्पनीहरु आफैं मा यो प्रणाली को आफ्नो गाडी मा मानक को रूप मा हुनेछ। जब हामी तपाईंलाई भन्छौं कि तपाईं अब CarPlay प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, यो यो हो कि यदि तपाईंले खरीद गर्ने निर्णय गर्नुभयो भने, उदाहरण को लागी, एक मिल्दो अग्रगामी टोली लाई त्यसो गर्न प्रश्न मा कार को निर्माण को लागी पर्खनु पर्दैन।
स्पेनमा त्यहाँ मोडेलहरू सम्बन्धी एक रोडम्याप छ जुन कारमा एप्पल प्रणाली र हाम्रो सहकर्मी इग्नासियो सालासँग उपयुक्त हुँदैन वा हुँदैन। उनले हामीलाई एउटा लेखमा धेरै अघि भनेका थिए।
यद्यपि, आज हामी तपाईंलाई एक अग्रणी विकल्प देखाउन चाहान्छौं जसले तपाईंको कारमा कारप्ले ल्याउनेछ। यो एक टोली हो जसले प्रणाली लागू गर्दछ कि कपर्टिनो मानिसहरूले तपाईंको आईफोन कारसँग मिल्दो बनाउनको लागि योजना गरेका छन्।
यस प्रश्नको मोडल जुन म सञ्चालनमा हेर्न सक्षम भएको छु AVIC-8000NEX। यस उपकरणको साथ यसको फर्मवेयर अद्यावधिक गरेपछि प्रयोगकर्ता अनुभव उत्कृष्ट भएको छ, त्यसैले हामी यो मान्छौं कि जब यो सवारीसँग मानक आउँदछ। सबै चीज एक आकर्षण जस्तै काम गर्दछ र नजिकको सवारी साधनको आन्तरिक डिजाइनसँग जोडिएको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि कसरी तपाइँको सवारीसाधन CarPlay अनुकूल बनाउने?
बीटा समाप्त भयो, Sonos आधिकारिक रूपमा एप्पल संगीत संग आफ्नो साझेदारी घोषणा
एप्पल वाचको सम्बन्धमा आईओएस विकासकर्ताबाट क्रसिंग कथनहरू